लेफ्ट रिभ्यु अनलाइन २०७५ फागुन १८ गते शनिवार
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कुशल अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी हाम्रा माझ रहनुभएन । ८३ वर्षीय उहाँको उपचारको क्रममा शनिबार ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको हो ।
श्वासप्रश्वास र निमोनियालगायतका समस्या भएपछि २ महिनादेखि उहाँलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । मेडिसिटी अस्पतालमा एक महिना प्रयास गर्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि माघ २४ गतेदेखि ह्याम्स अस्पतालमा सारिएको थियो । अधिकारीलाई १६ दिनदेखि भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । उहाँले तीन दिनदेखि परिवारका सदस्यले बोलाउँदा प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुभएको थिएन ।
अधिकारीको शुक्रबार साँझदेखि पिसाब रोकिएको थियो । अस्पतालले शनिबार दिउँसो साढे ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर अधिकारीको सबै अंगले काम गर्न छोडेको जनाएको थियो । अस्पतालको धारणापछि अधिकारीको अवस्था सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
छलफलअघि मन्त्रीद्वय लालबाबु पण्डित तथा गोकर्ण बिष्ट र पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम ह्याम्स अस्पताल पुग्नु भएको थियो ।
दाजुभाइ नै मन्त्रीमण्डलमा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अधिकारी बुवा रामचन्द्र अधिकारी र आमा पूर्णकुमारी अधिकारीको कोखबाट सन १९३६ मा महोत्तरीको भ्रमरपूरा गाउँमा जन्मिनु भएको हो ।
उहाँको स्थायी ठेगाना मोरङ्गको विराटनगर वडा नं. १० र ललितपुर सानेपामा थियो । उहाँकी एक श्रीमती ओमकुमारी अधिकारी र तिन छोरी हुनुहुन्छ ।
बि. सं. २००८ सालदेखि उहाँ १६ वर्षको उमेरमा नै राजनीतिमा संलग्न भई क्रियाशील हुँदै आउनु भएको थियो । उहाँले ४ वर्ष भूमिगत, ३ वर्ष निर्वासन र ३ वर्ष बन्दी जीवन विताउनुभएको थियो ।
उहाँ लामो समय पार्टीमा पोलिटब्यूरो सदस्य हुनुभयो । भरतमोहन मनमोहन अधिकारीका आफ्नै भाई हुनुहुन्थ्यो । दाजु प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५१ साल पुसमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बन्नुभयो । अधिकारीले चारपटक अर्थमन्त्री, एकपटक यातायात तथा निर्माणमन्त्री, चारपटक सांसद, संसदीय दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक, पार्टीको आर्थिक, उद्योग, संसदीय, अनुगमन लगायतका विभागमा प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिसक्नुभएको छ ।
कुशल अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अधिकारी
छ दशक राजनीतिमा सक्रिय नेता अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बृद्धभत्ता दिन थाल्नुभयो । बृद्धभत्ता र स्थानीय निकायमा विकास बजेट बिनियोजन अधिकारीकै योजना थियो । संसद विघटनपश्चात बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा अधिकारी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बन्नुभयो । त्यसबेला पनि उहाँले अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुभयो । अस्पतालमा सुत्केरी हुनेले हिमाली क्षेत्रमा १ हजार ५ सय, पहाडी क्षेत्रमा १ हजार र तराईमा ५ सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।
पटकपटक सरकारमा रहेर उल्लेखनीय काम गर्नुभएका अधिकारीले पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा अघि सारिएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रम, वृद्धभत्ता र सुत्केरी खर्च अत्यन्तै लोकप्रिय बनेको छ ।
२०४७ मा संविधान मस्यौदा समिति सदस्य अधिकारी मोरङ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा दुईपटक निर्वाचित हुनु भयो । अधिकारी मनमोहन मेमोरियल फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
७० वर्ष पुगेपछि पार्टीको सक्रिय जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने नीति बमोजिम उहाँले नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट अवकाश लिनुभयो । देशकै मूर्धन्य अर्थशास्त्रीमा गणना हुने उहाँ पटकपटक मन्त्री रहेपनि आफ्नो चरित्र निष्कलंक र बेदाग राख्न सफल हुनुभएको थियो।
‘नेपालमा औद्योगीकरणका समस्या’ र ‘मेरो जीवनयात्रा’ नामका उहाँका दुई पुस्तक प्रकाशित छन् ।
नेता अधिकारी प्रति लेफ्ट रिभ्यु अनलाईन परिवार हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।
पछिल्लाे - भरतमोहनजीको स्वास्थ्यमा कुनै मिराकल हुन पनि सक्छ – अध्यक्ष प्रचण्ड
अघिल्लाे - नेता भरतमोहन अधिकारीको पार्थिव शरिर धुम्बाराहीमा, आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिने